Android လက်စွဲ၊ အစပြုသူများအတွက်အခြေခံလမ်းညွှန်နှင့်ပထမအဆင့်။ Androidsis
Android လက်စွဲ၊ အစပြုသူများအတွက်အခြေခံလမ်းညွှန်
သင်တစ် ဦး ရှာဖွေခဲ့ကြပါ android လက်စွဲစာအုပ် နှင့်ဤ post ကိုပထမ ဦး ဆုံးအပေါင်းတို့၏, ကြိုဆိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သငျသညျဖြစ်နိုင်သောရွေးချယ်စရာနှစ်ခုအဘို့ဤဝေးယခုလာကြပြီ။ သငျသညျစမတ်ဖုန်းရှိခြင်းကိုခုခံကာကွယ်သော "weirdos" များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်နောက်ဆုံးတွင်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးသည်သို့မဟုတ်အခြား operating system မှလာသည်။ Android မိုဘိုင်း operating system ၏အဆင့်အတန်းနှင့်အညီခြေလှမ်းလှမ်းလိုသည်။ သင်သည်ရှာဖွေခြင်းအဆင့်၌ရှိနေသေးပြီးအရာအားလုံးမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသိလိုပါလိမ့်မည်။ အခြားအရာများကြားတွင်ခြေလှမ်းများလှမ်းလာသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာအခြားအရာများနှင့်အတော်အတန်ဝေးကွာနေသည်ဟုခံစားရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်နောက်ဆုံးအားဖြင့် "hoop through" ကိုကူးယူပြီး Android စမတ်ဖုန်းကို ၀ ယ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သောသူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်သင်နောင်တရမည်မဟုတ်ပါ။ ဒီနေ့ငါတို့နဲ့အတူသွားမယ် အားလုံးအခြေခံ Android configuration settings ကိုတဆင့် step by step သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကတတ်နိုင်သမျှကျေနပ်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ဖုန်းအသစ်အားအပြည့်အဝလည်ပတ်စေရန်ကူညီပေးပါမည်။ မည်သည့်နေရာမှလာသည်ဖြစ်စေ Android ကိုကြိုဆိုပါတယ်။
1 Android ဆိုတာဘာလဲ။
3 Android တွင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသောအလွှာများဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
6 သင်၏ Android မိုဘိုင်း၏အခြေခံဖွဲ့စည်းမှု
6.1 Android ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ
6.2 သင်၏ Android စက်ကို "ကိရိယာအသစ်" အဖြစ်မည်သို့သတ်မှတ်မည်နည်း။
6.3 ကျွန်ုပ်တို့၏ Android စမတ်ဖုန်းအတွက်ဝိုင်ဖိုင်ကွန်ရက်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ
6.6 Android တွင်လုံခြုံရေးနှင့်သော့ဖွင့်ခြင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ပါ
7 ကျွန်ုပ်၏ Android operating system သည်နောက်ဆုံးပေါ်ဟုတ်မဟုတ်သိရန်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း
8 Android မှာအက်ပ်တွေကိုဘယ်လိုဒေါင်းလုပ်လုပ်မလဲ
9 Android မှာ Apps တွေကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲ၊
10 Android တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအက်ပ်များ
10.1.1 Facebook က
10.1.3 Instagram ကို
10.2.1 WhatsApp ကို
11 သင့်စမတ်ဖုန်းအတွက်အသုံးဝင်သော application များ
12 Android လုံခြုံရေး
13 ကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်များကို Android တွင်မည်သို့ကူးယူရမည်နည်း
14 ကျွန်ုပ်၏ဒေတာများကို Android မှ iPhone သို့မည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်နည်း
14.1 iOS အတွက် Google Drive
14.2 iOS အတွက် Google ဓါတ်ပုံများ
14.3 Contacts Transfer / Backup ကိုရွှေ့ပါ
15 သင်သည် Android လောကတွင်မိမိကိုယ်ကိုနှစ်မြှုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ
အကယ်၍ သင်သည်ဤစမတ်ဖုန်းလောကတွင်အသစ်အဆန်းဖြစ်ခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထာဝရပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်မပတ်သက်တော့ပါ။ သင်သိရမည် Android သည် Google ၏မိုဘိုင်း operating system ဖြစ်သည်။ အဘယ်သို့သောအကြောင်း ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးအသုံးပြုသောမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်လည်ပတ်မှုစနစ်။ လတ်တလောတင်ထားသောတက်ကြွသောသုံးစွဲသူများ၏လက်ရှိအရေအတွက် နှစ်ဘီလီယံကျော်။ ဘာမှမရှိဘူး။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ Apple ရဲ့ operating system နဲ့ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှုဟာသုံးစွဲသူ ဦး ရေထက်နှစ်ဆကျော်ပိုများပါတယ်။ ငါတို့ပြောနိုင်တယ် စပိန်နိုင်ငံသည် Android နိုင်ငံဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ရှိစမတ်ဖုန်း ၉၂ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည်အစိမ်းရောင် android စနစ်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
2017 ခုနှစ်တွင် Android ၎င်းကိုစတင်ရောင်းချပြီး ၁၀ နှစ်ကြာသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ၊ တက်ဘလက်များနှင့် ၀ တ်ဆင်နိုင်သောအဝတ်အစားများပေါ်တွင်တက်ကြွစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဂူးဂဲလ်၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဖြင့် Android Inc. မှဆော့ဖ်ဝဲလ်ကုမ္ပဏီကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုနောက်ဆုံးတွင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်ဂူဂဲလ်မှဝယ်ယူလိုက်သည်။ သူ၏အသိအမှတ်ပြုဖခင်အန်ဒီရူဘင်သည်အင်ဂျင်နီယာများရွေးချယ်ထားသောအဖွဲ့နှင့်အတူစနစ်အပေါ် အခြေခံ၍ စနစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်သည်။ Linux ။ ဒါက Android operating system ပေါ်လာသည်။
ဒီ operating system က Apple ရဲ့ iOS system ထက်ပိုပြီးအားသာချက်တစ်ခုက open source တစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သည့်ထုတ်လုပ်သူမဆို၎င်းကို သုံး၍ ၄ င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ နှင့် မည်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည်မတူညီသော application များကိုဖန်တီးနိုင်သည် ဂူဂဲလ်မှအခမဲ့ဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်ကမ်းလှမ်းသည့်ပစ္စည်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အတိုချုပ်အားဖြင့်၎င်းသည်ပconိသန္ဓေတည်ခဲ့ရာအတွက်၎င်းကိုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ touchscreen smart devices များအတွက် operating system တစ်ခု။ ဒီလိုမျိုး, စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မဆို၊ မဖြစ်မနေ Google လိုင်စင်နှင့်အတူ, သင်သည် Android operating system ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဘယ် Apple ကမလုပ်ပါဘူး ဥပမာအားဖြင့် BlackBerry ကဲ့သို့သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် OS ကိုသုံးသောထုတ်လုပ်သူများပင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစနစ်ကိုအရှုံးပေးလိုက်ရသည်။
Android ဆိုတာက လျှောက်လွှာဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်အခြေခံပြီး operating system ကို။ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များကို ၄ င်းတို့၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတွက်အခြေခံဟုသတ်မှတ်ထားပြီး၎င်းကို operating system ကိုယ်တိုင်မှစံအဖြစ်ထည့်သွင်းထားသည်။ အစိတ်အပိုင်းပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းကိုလွယ်ကူစေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့်ဗိသုကာစနစ်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့် application ကမဆို device ၏အရင်းအမြစ်များကိုသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းကို user မှအစားထိုးနိုင်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် application များအကြောင်း၊ သူတို့တပ်ဆင်ခြင်းအကြောင်းပြောပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်းလက်ရှိထုတ်လုပ်သူအားလုံးနီးပါးသည်သူတို့၏စက်ကိရိယာများကိုအသက်ဝင်စေရန် Google စနစ်ကိုအသုံးပြုကြသည်။ တစ်ခြားကုမ္ပဏီများနှင့်ခွဲခြားရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာအလွှာများဟုခေါ်သည်။ ဒါဟာအဖြစ်အလွန်ဂရပ်ဖစ်လမ်းအတွက်ရှင်းပြသည်ပါလိမ့်မယ် အခြားအဝတ်အစားများဖြင့် Android စနစ်ကို ၀ တ်ဆင်ပါ။ operating system တူညီနေဆဲဖြစ်သော်လည်းအသွင်အပြင်၌ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒီပုံဟာ Google ဖန်တီးထားတဲ့ပုံနဲ့ကွဲပြားတယ်။ ဒီမှာ optimization ၏အဆင့်ကိုအဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည် ၎င်းကို Android ပေါ်တွင် layer တစ်ခုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့သော Sony ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများ, ရှိပါတယ် အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်အချို့သော configuration များကိုကြည့်ရှုခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားသည်အထိပင်ပိုမိုပြင်းထန်သောစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းအလွှာများရှိသည်။ Xiaomi ကဲ့သို့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သော MIUI ဟုခေါ်သော operating system ၏ဗားရှင်းသည်၎င်း၏သုံးစွဲသူများထံမှအလွန်ကောင်းမွန်သောပြန်လည်သုံးသပ်မှုရရှိသည်။ ထိုအရှိပါတယ် "စင်ကြယ်သော" Android ကိုကမ်းလှမ်းရန်ရွေးချယ်သောအခြားသူများ၊ အများကြီးသန့်ရှင်းခြင်းနှင့် configurable ။
အရောင်များကိုမြည်းစမ်းဖို့။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ၊ အသွင်သဏ္withoutာန်မရှိသည့် Android တစ်ခုကိုနှစ်သက်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံမှ ၎င်းအလွှာများသည်အရည်ရှိပြီးကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နေသည့်စနစ်တစ်ခုကိုနှေးကွေးစေနိုင်သည် မလိုအပ်တဲ့။
သင့်တွင် Android စမတ်ဖုန်းရှိချင်မှရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်သင့်တွင် gmail အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုရှိရန်အလွန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်တွင်ရှိပြီးသားဆိုလျှင်၎င်းသည်ဂူဂဲလ်ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားဖြစ်သည်။ သင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်ကိုသင်မဖန်တီးရသေးပါကသင်၏စက်၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်မစမှီ၎င်းကိုသင်ပြုလုပ်ရမည်။။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်ဟာ ၂ မိနစ်ထက်ပိုပြီးမလိုအပ်ပါ။ ဒီ Android လက်စွဲစာအုပ်ထဲမှာအရာအားလုံးကိုရှင်းပြထားတယ်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကသင်အီးမေးလ်အကောင့်တခုဖွင့်တာနဲ့တူတယ်၊ သင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာမှာသင်လိုချင်သောနာမည်ကိုတစ်ယောက်ယောက်ကအသုံးပြုထားပြီးဖြစ်သည်။ ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်တွေအပါအ ၀ င်၊ သင့်မှာဂူဂဲလ်ရဲ့အမှတ်အသားကိုချက်ချင်းဖန်တီးလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်သင်မှာသံသယရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာတစ်ဆင့်ချင်းစီအတွက်နည်းလမ်းတွေနဲ့ကွဲပြားတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှင်းပြပါမယ်။ ဂူဂဲလ်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးပါ.
တစ်ချိန်ကဖော်ထုတ်ခဲ့သည်ကိုသင်ရယူရန်အဆင်သင့်ရှိသည် အကြီးဆုံး app စတိုးဆိုင်မှာ Play Store ကို။ ထိုနည်းတူစွာပင်သင်လုပ်နိုင်သည် အသုံးပြုမှုအောင် သင့်ရဲ့ Android ကိရိယာပေါ်တွင် ဂူဂဲလ်ကမ်းလှမ်းသောဝန်ဆောင်မှုများအားလုံး အလကား။ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရဆိုလျှင်၎င်းတို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်တွင်ကြိုတင်တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များဖြစ်သည်။ ကိရိယာ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းတို့သည်ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ပိုင်ဂီတဖွင့်စက်များစသည်တို့နှင့်လိုက်ပါသွားနိုင်သည်။
ဂူဂဲလ်ကကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အလေးအနက်ထားသည် ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသည် ကျွန်ုပ်တို့စမတ်ဖုန်းများကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်သည့်ကိရိယာများဆက်တိုက်ဖြစ်သည် အများဆုံးအဆင်ပြေလမ်းအတွက်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်များပြားပြီးအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူးဂဲလ်မှအခမဲ့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများကိုအပိုင်းများခွဲခြားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android လမ်းညွှန်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်သင့်အားအကောင်းဆုံးပေးနိုင်သောအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်လိုက်ပြီ။
Google Documents, un အွန်လိုင်းစာသားအယ်ဒီတာ မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းကိုမဆိုသင်တည်းဖြတ်နိုင်ပြီးမျှဝေနိုင်သည်။
Google spreadsheets အဲဒါ spreadsheet တစ်ခုပါ c၎င်းကိုမျှဝေခြင်း၊ တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောတည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်လူသိရှင်ကြားပြုလုပ်ခြင်းနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအသုံးပြုခြင်းစသည်တို့နှင့်အတူ။
Google တင်ပြချက်များ, သင် "ပါဝါအမှတ်" အဖြစ်သင်သိလိမ့်မည်အရာကိုအနီးဆုံးအရာ။ သင်၏တင်ဆက်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်နှင့်ဖွင့်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောအသုံးပြုရန်အစီအစဉ်တစ်ခု။
Google Drive ကို, သင်၏ဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းရန်လုံခြုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် အများဆုံးအသုံးပြုစာရွက်စာတမ်းများ, ပင်လျှောက်လွှာဒေတာ။
Google ကကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးစနစ်တကျဖြစ်လာဖို့အခွင့်အရေးပေးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများတွင်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုတန်ဖိုးအရှိဆုံးအကြောင်းအရာရှိသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ရရှိနိုင်ပါသည်
ဓါတ်ပုံများ googleကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖမ်းယူမှုစုစည်းဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင်မသာ။ အယ်လ်ဘမ်များကိုရက်စွဲများ၊ နေရာများအလိုက်အလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုတက်ကမ်းလှမ်းရန်အပြင် သိုလှောင်မှု ၁၅ GB ရှိသည့်အတွက်ဓါတ်ပုံများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်နေရာလွတ်မပေးနိုင်ပါ.
Google အဆက်အသွယ်များ သိုလှောင်ထားသောနံပါတ်များဆုံးရှုံးခြင်း၊ သို့မဟုတ်သူတို့ကိုကိုယ်တိုင်လက်ဆင့်ကမ်းခြင်းကြောင့်ဖုန်းများပြောင်းလဲခြင်းကိုမည်သည့်အခါကမျှကျွန်ုပ်တို့အားကြောက်ရွံ့စေသည်။ အဆက်အသွယ်များကိုသင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပါ။ သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည့်နေရာတွင်ရှိနေလိမ့်မည်.
Google ပြက္ခဒိန်ဂူဂဲလ်ပြက္ခဒိန်ဟာသင်ဘာမှမမေ့သွားပြီးအရာအားလုံးကိုရေးချထားနိုင်အောင်။ သတိပေးချက်များ၊ သတိပေးချက်များ၊ ဘာမှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူး
ဘာမှမမေးနိုင်ရင်ဘာကြောင့်စမတ်ဖုန်းလိုတာလဲ။ ရန်ရှိသည် ဂူဂဲလ်ကိုသင့်လက်ထဲမှာကိုင်ထားပါ ၎င်းသည်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည့်ဂူဂဲလ်ဝစ်ဂျက်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အား Google အကြောင်းတစ်ခုခု ပြော၍ ပြောနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သင့် browser ၏၎င်း၏လူသိများသော application အားရှာဖွေ။ ရှာဖွေပါ။ ရန်သူ
Google က Chrome ကို သင်၏ဘရောက်ဇာ၏လူသိများသောလျှောက်လွှာအားရှာဖွေ။ ရှာဖွေရန်
Google Maps ကို။ သင်တစ်စုံတစ်ရာသည်အဘယ်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုသိလိုသည်ဖြစ်စေ၊ မည်သို့သွားရမည်ကိုသိလိုသည်ဖြစ်စေ“ G” သည်သင့်ကိုချက်ချင်းကူညီရန်ဖြစ်သည်။ ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက် Google ကသင့်ကိုမထားဘူး
ဂူဂယ်လ်ဘာသာပြန်, သင်ဘယ်နေရာမှာပဲရှိပါစေ၊ ဘာသာစကားသည်သင့်အတွက်လည်းအတားအဆီးဖြစ်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးသည်အာရုံအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်တူဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းနေဖြင့်သက်သာရာရပြီ။ သူတို့ရဲ့ Android ဖုန်းကို multimedia ဖျော်ဖြေရေးစင်တာအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ၎င်းအတွက်လျှောက်ထားချက်အမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ခံစားနိုင်သည်။
YouTube ကို။ streaming များဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းတန်းတူ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဗွီဒီယိုများကိုဖွင့ ်၍ မျှဝေပါသို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်တင်ပါ။
ဂူဂဲလ်ပလေးဂီတ သင်၏လက်၌အရည်အချင်းရှိသောမာလ်တီမီဒီယာပလေယာထည့်ထားသည်။ သင်၏စက်ပစ္စည်းများမှတေးဂီတကိုဖွင့်ခြင်းအပြင်သင်နောက်ဆုံးရသည့်နောက်ဆုံးရလဒ်များကိုလည်းသင်ရယူနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်သင်အကြိုက်ဆုံးအနုပညာရှင်ကနောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်ကိုဝယ်ပါ။
Google Play ရုပ်ရှင် တေးဂီတကဲ့သို့ပင်ရုပ်ရှင်၊ တီဗွီအစီအစဉ်များနှင့်စီးရီးများမှနောက်ဆုံးသတင်းများကိုရယူပါ။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ထင်ရှားသောဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သော်လည်းဂူဂဲလ်ကသင့်အားဤမျှလောက်များစွာကမ်းလှမ်းထားသည်။ မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း သင့်ရဲ့ Android ကိရိယာနှင့်အတူဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုလုံးကမ္ဘာ။ သင်ပျောက်ဆုံးနေသောအရာအားလုံးကိုသတိပြုမိပါသလား။ Android စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး ၀ ယ်လိုက်ခြင်းအတွက်သင်နောင်တမရပါဘူး။ အကယ်၍ သင်၎င်းကိုမဝယ်သေးလျှင်၊ ဤစာမူကိုသင်ဖတ်ပြီးသည့်အခါသင်ယုံကြည်စိတ်ချမည်မှာသေချာသည်။
သင်၏ Android မိုဘိုင်း၏အခြေခံဖွဲ့စည်းမှု
သင်ဝယ်ပြီးပြီလား ဂုဏ်ယူပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာမင်းရဲ့ Android ဖုန်းအသစ်ကိုမင်းလက်ထဲမှာရှိရင် အချိန်တန်ပြီ။ ဒီ Android လက်စွဲစာအုပ်ထဲမှာကန ဦး စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုပြုလုပ်ရန်တစ်ဆင့်ချင်းသင်လမ်းညွှန်သွားမှာပါ။ သင်၏ဖုန်းအသစ်ကိုယင်း၏အကွက်မှဖယ်ရှားပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့မှာရပါလိမ့်မည် SIM ကဒ်ကိုအရင်ထည့်ပါ။ ပြီးတော့ကြောက်စိတ်မရှိဘဲ configuration ကိုစတင်ရန် power button ကိုနှိပ်ပါ။
Android Device အသစ်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပထမဆုံးလုပ်ရမှာပါ။ သူကကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ဆက်သောအတူသံတမန်ရေးရာကြိုဆိုသည့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့စမတ်ဖုန်းနှင့်ထိုအခိုက်အတန့်မှအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မည့်ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ရမည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဘာသာစကားများစာရင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်လျော်သောတစ်ခုကိုရွေးပါလိမ့်မည်။
မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲလိုပါက ကျနော်တို့အလွယ်တကူလုပ်နိုင်ကန ဦး ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအတွက်ရှေးခယျြ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းမီနူးသို့ကျွန်ုပ်တို့ညွှန်ကြားမည်မဟုတ်ပါ «ချိန်ညှိချက်များ»။ ဒီကနေပုံမှန်အားဖြင့်အတွင်းပိုင်းဝင် "အဆင့်မြင့်ဆက်တင်များ" ကျနော်တို့ option ကိုရှာရန်ရှိသည် "ပုဂ္ဂိုလ်ရေး"။ ဒီတည်နေရာမှ, အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဘာသာစကားနှင့်စာသားထည့်သွင်းခြင်း" ဘာသာစကားစာရင်းကိုရယူပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောဘာသာသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သင်၏ Android စက်ကို "ကိရိယာအသစ်" အဖြစ်မည်သို့သတ်မှတ်မည်နည်း။
နောက်ဆုံးပေါ် Android ရရှိနိုင်သည့်ဗားရှင်း ကျနော်တို့စမတ်ဖုန်းကိုဖွင့်သည့်အခါများအတွက်အသစ်သော configuration options များ။ ထို့ကြောင့်၊ ဝယ်ယူထားသောဖုန်းအသစ်သည်ယခင်ဖုန်းနံပါတ်ကိုအသစ်တဖန်ပြန်လုပ်ရန်လုပ်ဆောင်လျှင်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။ ဤအချက်မှ ဖုန်းအသစ်ကိုရှေးဟောင်းဖုန်းနှင့်အတူတူပင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ထားသည့် application များ၊ Wi-Fi သော့များစသည်တို့နှင့်ပင်လျှင်။
သို့သော်ယခုကျွန်ုပ်တို့ကိစ္စမဟုတ်ပါ နောက်ပြီးအခြေခံဖွဲ့စည်းမှုကိုဆက်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးစရာကိုရွေးချယ်ရမည် "ကိရိယာအသစ်အနေဖြင့်သတ်မှတ်ပါ"။ ဤနည်းအားဖြင့်အောက်ပါအဆင့်များနှင့်ချိန်ညှိချက်များကိုပထမဆုံးအကြိမ်ထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ ဒီတော့နောက်ခြေလှမ်းကိုဆက်သွားကြစို့။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android စမတ်ဖုန်းအတွက်ဝိုင်ဖိုင်ကွန်ရက်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ
Wi-Fi ကွန်ယက်ကိုရွေးချယ်ခြင်း၏ခြေလှမ်းပေမယ့် setup ကိုအပြီးသတ်ဖို့လုံးဝမလိုအပ်ပါ ကိရိယာအသစ်၏။ အကယ်၍ ဤအရာကိုအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန်အထူးအကြံပြုလိုပါက။ ဤနည်းအားဖြင့်စက်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပြည့်စုံလိမ့်မည်။ ရရှိနိုင်သည့် Wi-Fi ကွန်ယက်များစာရင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ရမည်။ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် Access code ကိုရိုက်ထည့်ပြီးနောက်“ Continue” ကိုရွေးရမည်။
တစ်နေ့လုံး Wi-Fi ကွန်ယက်တစ်ခုထက်ပိုပြီးသုံးလေ့ရှိသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်သင်လိုအပ်သောကွန်ယက်အားလုံးကိုသင်ထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသည် အခြားမည်သည့်အချိန်တွင်ထိုသို့ပြုမှ။ ကျနော်တို့အိုင်ကွန်ကိုတဖန်ဝင်ရောက် «ချိန်ညှိချက်များ» ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိရိယာနှင့် option ကိုရွေးပါ «ဝိုင်ဖိုင်"။ Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုကိုဖွင့်ပြီးပါက၊ ရရှိနိုင်သည့်ကွန်ယက်များကိုစာရင်းတစ်ခုတွင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ရိုးရိုးလေးပါ လိုချင်သော network ကိုရွေးပြီး access code ကိုရိုက်ထည့်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာသည်သိမ်းဆည်းထားသောကွန်ယက်များသို့ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်သောအခါအတွင်းအလိုအလျောက်ဆက်သွယ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၌ဂူးဂဲလ်အကောင့်တစ်ခုရှိပြီးသားသို့မဟုတ်အထက်ပါညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပြီးသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်မှပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုခံစားနိုင်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ကျနော်တို့ရိုးရှင်းစွာရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့် "xxx@gmail.com" ဖြင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ဤအရာပြီးသည်နှင့်နောက်အဆင့်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုအခြေအနေများကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
gmail အကောင့်မရှိဘဲ configuration များကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိူင်သည်။ ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်ငါတို့သည်သင်သူမနှင့်အတူပြုကြရန်အကြံပြုပါသည်။ ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဂူဂဲလ်မှပေးသောဝန်ဆောင်မှုများကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်သည်။ ဒီတော့ configuration ကိုအားလုံးအရိုအသေပိုမိုပြည့်စုံလိမ့်မည်။
ပြီးခဲ့သည့်အဆင့်ပြီးဆုံးသွားသောအခါ configuration menu မှကျွန်ုပ်တို့အခြား email account တစ်ခုထပ်ထည့်လိုပါသလားဟုမေးလိမ့်မည်။ ဒီမှာ ကျွနု်ပ်တို့သုံးသောအီးမေးလ်အကောင့်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်နိုင်သည် မင်္ဂလာပါ။ Google သို့မဟုတ်အခြားအော်ပရေတာကပိုင်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေ။ ဂျီမေးလ်အက်ပလီကေးရှင်းသည်၎င်းတို့ကိုဖိုဒါများတွင်စုစည်းရန်ဂရုစိုက်လိမ့်မည်။ စာတစ်ကြောင်းတည်းကိုတစ်ချိန်တည်းမြင်နိုင်သည် (သို့) အဝင်စာများစသည်တို့ကိုတစ် ဦး ချင်းရွေးချယ်နိုင်သည်။
Wi-Fi ကွန်ယက်များကဲ့သို့စက်ကိရိယာပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည့်အီးမေးလ်အကောင့်များကိုထပ်ထည့်နိုင်သည်။ ဒီအဘို့အကျွန်ုပ်တို့သည်ထပ်ခါတလဲလဲအိုင်ကွန်ကိုသွားပါလိမ့်မယ် «ချိန်ညှိချက်များ» ဒီ option ကိုဘယ်မှာရှာသင့်သလဲ "အကောင့်များ"။ ဒီကနေရွေးပါလိမ့်မယ် "အကောင့်ထည့်ပါ" ကျွန်ုပ်တို့အကောင့်အမည်၊ လျှို့ဝှက်နံပါတ်စသည်တို့ကိုထည့်သွင်းပါမည်။ ထိုခဏခြင်းတွင်၎င်းသည်ကျန်သူများနှင့်အတူ inbox ထဲတွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
ဤရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းနိုင်သောလုံခြုံရေးရွေးချယ်မှုများသည်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်သင်၌ရှိသောအကျိုးခံစားခွင့်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ လက်ရှိတွင်ထုတ်ကုန်အသစ်အားလုံးနီးပါးသည်တပ်ဆင်ထားသည် လက်ဗွေဖတ်စက်။ ဒီနည်းပညာမပါ ၀ င်တဲ့ဖုန်းတွေရှိနေပေမယ့်လည်းဒီနည်းပညာကိုထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး iris စာဖတ်သူကို o မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှု.
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာတွင်လုံခြုံရေးစနစ်များမှသတင်းများမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ဂူဂဲလ်မှပေးသောကိရိယာများကိုကျွန်ုပ်တို့ကောင်းကောင်းအသုံးပြုလျှင်၎င်းသည်တတိယပါတီများမှလုံခြုံမှုရှိနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းသော့ဖွင့်ပုံစံရှိနိုင်ပါသည် ဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး မှတဆင့်လုပ်ပါ ကိန်းဂဏန်းကုဒ်။ ဤအဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုသာရွေးနိုင်သည်။ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ခုအားအသုံးပြုရန်အကြံပေးသည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်၏အခြေခံဖွဲ့စည်းမှု၏နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းအတွက်အနည်းဆုံးအရေးကြီးသည်။ လုံခြုံရေးစနစ်ကိုရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းသည်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။ ဒီ settings တွေဟာများသောအားဖြင့် Android devices အားလုံးမှာအတူတူဖြစ်တယ်။ သို့သော်အမှာစာသည်စိတ်ကြိုက်အလွှာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည့် operating system ဗားရှင်းပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တည်နေရာပေါ် မူတည်၍ သင့်တော်သောအချိန်ဇုန်ကိုရွေးချယ်ပါမည်။ ထိုအရပ်မှစက်ပစ္စည်းအားပြသသည့်အချိန်သည်မှန်ကြောင်းသေချာစေနိုင်သည်။
အခုဆိုရင်ငါတို့ပစ္စည်းအသစ်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်နဲ့ခံစားနိုင်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့်ပထမ ဦး စွာ၊ သင့်ကိုသင်အနည်းငယ်စိတ်ကြိုက်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဤ operating system ၏ထူးခြားချက်တစ်ခုမှာ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအသွင်အပြင်ပေးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်မှာသေချာသည်။ ကိရိယာ၏အခြေခံဖွဲ့စည်းမှုပုံစံမှ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆောင်ပုဒ်၊ ဖုန်းမြည်သံသို့မဟုတ်သတင်းစကားကိုရွေးချယ်နိုင်သည် ငါတို့အများဆုံးကြိုက်တယ် သူ့လိုပဲ ဝေါလ်ပေပါ သော့ခတ်သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်အသုံးပြုမှု။ သို့မဟုတ်အသိပေးချက်တစ်ခုစီနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော LEDs များ၏အရောင်များပင်။
ကျွန်ုပ်၏ Android operating system သည်နောက်ဆုံးပေါ်ဟုတ်မဟုတ်သိရန်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း
ဂူဂဲလ်မှကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းထားသည့်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောအပလီကေးရှင်းများစွာကိုရေတွက်ပြီးပါကစမတ်ဖုန်းသည်မည်သည့်အလုပ်အတွက်မဆိုအပြည့်အဝလည်ပတ်နေပြီဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ပြင်ပ application များတပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ software သည်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးရန်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ device menu ထဲကနေကျွန်တော်တို့သွားလိမ့်မယ် "ချိန်ညှိချက်များ"။ ကျနော်တို့ဒီ option ကိုရှာပါလိမ့်မယ် "ငါ့စက်ပစ္စည်းအကြောင်း" ပြီးတော့ကျနော်တို့ကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီ option ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ငါတို့ရွေးရမယ် "နောက်ဆုံးသတင်းများရှာဖွေရန်" (သို့မဟုတ်အလွန်ဆင်တူ option ကို) ။ ထည့်သွင်းရန်ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းရှိသလား။
ဆိုင်းငံ့ထားမွမ်းမံမှုရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ကလစ်နှိပ်ပါ "ကူးယူပြီး install" အလိုအလျောက် install လုပ်လိမ့်မည်သည့်ချက်ချင်း download, စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးကျွန်ုပ်တို့ဖုန်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ မှတ်ရန် သင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်နည်းသောဘက်ထရီဖြင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းတစ်ခုကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ မရပါ.
လက်တွေ့ကျတဲ့အစွန်အဖျားအဖြစ် wifi ဆက်သွယ်မှုဖြင့်ဤစစ်ဆင်ရေးကိုလုပ်ဆောင်ရန်အဆင်ပြေသည်။ လည်ပတ်မှုစနစ်၏နောက်ဆုံးသတင်းကိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာသုံးစွဲမှုကိုပိုလျှံစွာတိုးစေနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးပေါ် operating system တစ်ခုသည်အမြဲတမ်း ပို၍ လုံခြုံပြီးထိရောက်မှုရှိသည်။ ကိရိယာကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အသုံးချခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းနှင့်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ခြင်းသည်သင့်အား application လိုက်ဖက်မှုပြproblemsနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရန်တားဆီးပေးလိမ့်မည်။
အခုဟုတ်တယ် ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းသည်လျှောက်လွှာများကိုလက်ခံရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့လိုသလောက် applications များကို download နှင့် install လုပ်နိုင်သည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအကြံပေးချက်ကတော့အဲဒါကိုလုပ်ဖို့ပါ တရားဝင်စတိုး၊ ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးမှကြည့်ပါ။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားနိုင်သမျှအရာအားလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုတွင် application သန်းတစ်သန်းနီးပါးကိုတွေ့လိမ့်မည်။ Play Store အမှတ်အသားကိုနှိပ်ရုံဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ကြိုတင်တပ်ဆင်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
မှစီစဉ်သည် ကျနော်တို့ရှာတှေ့နိုငျသောအကြားအမျိုးအစားများ, ဥပမာ, ဖျော်ဖြေရေး၊ လူနေမှုပုံစံ၊ ဓာတ်ပုံ၊ ပညာရေး၊ အားကစားရွေးချယ်စရာ ၃၀ ကျော်အထိရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူကြိုက်အများဆုံးမှရှာဖွေရန်သို့မဟုတ်ဂိမ်းများ၊ ရုပ်ရှင်များ၊ တေးဂီတများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ application ကိုရှာတွေ့မှာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင် application တစ်ခုထည့်သွင်းရန်၊ ပထမဆုံးအချက်ကတော့ Play Store ကိုသွားဖို့ပါ။ ထဲထဲဝင်ဝင် ကျနော်တို့လိုချင်သောလျှောက်လွှာကိုတွေ့ပြီအခါသင်ရုံရန်ရှိသည် အဲဒါကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၎င်းကိုဖွင့်သောအခါ၊ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်း၏ဖန်သားပြင်မျက်နှာပြင်များကိုကြည့်နိုင်သည်၊ မှတ်ချက်များကိုပင်ဖတ်ရှု။ သုံးစွဲသူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုကြည့်နိုင်သည်။ လျှောက်လွှာအခမဲ့သို့မဟုတ်ပေးဆောင်ကြောင်းစစ်ဆေးနေအဖြစ်။
Android မှာ Apps တွေကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲ၊
ငါတို့ကိုယုံကြည်စေခြင်းငှါ၊ "install" ကိုနှိပ်ပါ။။ Application သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Device တွင်အလိုအလျောက်စတင်ပြီးမိမိဘာသာတပ်ဆင်ပါလိမ့်မည်။ Installation ပြီးတာနဲ့ application က desktop ပေါ်မှာ icon အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုဖွင့ ်၍ ဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏အိုင်ကွန်ကိုသာနှိပ်ပါ။ ဘယ်လောက်လွယ်သလဲမြင်လား လျှောက်လွှာကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီး install လုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဒေါင်းလုတ်လုပ်တဲ့ app ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ပြproblemနာမရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့လည်းသူတို့ကိုအလွယ်တကူဖယ်ထုတ်နိုင်ပါသည်။ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာသွားရန်ဖြစ်သည် "ချိန်ညှိချက်များ"။ ဒီကနေရွေး "လျှောက်လွှာများ" install လုပ်ထားသော application များ၏စာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဖယ်ထုတ်လိုသည့်လျှောက်လွှာကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ရွေးရမည့်မီနူးတစ်ခုပေါ်လာမည် "ဖယ်ထုတ်ပါ"။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော Android ဗားရှင်းပေါ် မူတည်၍ မည်သည့် application ကိုမဆိုကိုင်ထားခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့တစ်ခုစီတွင်လက်ဝါးကပ်တိုင်တစ်ခုပေါ်လာမည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်လည်းလျှောက်လွှာကိုဖယ်ထုတ်လိမ့်မည်။
Play Store မှပေးထားသောရွေးစရာများကြောင့်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုချင်းစီသည်အခြားတစ်ခုနှင့်ကွဲပြားသည်။ သင့်ကိရိယာကမင်းအကြောင်းအများကြီးပြောထားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်ထားသည့် application များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရသာနှင့် ဦး စားပေးမှုကိုသိနိုင်သည်။ အားကစား၊ ဂိမ်းများ၊ တေးဂီတ၊ ဓာတ်ပုံပညာ။ ကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်နိုင်သောရွေးချယ်စရာများစွာရှိပြီးလူတိုင်းကိုစိတ်ကျေနပ်စေမည့်ရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲသည်။
ဒါပေမယ့်တောင်မှကျနော်တို့အများစုနှင့်အတူသဘောတူနိုင်ဘူး "အခြေခံ" applications များတစ်စီးရီး” ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အအကြံပြုထားသောသူတွေကိုအကြံပေးသွားကြသည်။ ၎င်းတို့အနက်မှကဏ္ sector တစ်ခုစီတွင်လူကြိုက်အများဆုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားကြသည်။ ၎င်းတို့ကိုတပ်ဆင်ပြီးပါကသင်၏ Android ဖုန်းအသစ်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ပိုင်လူမှုရေးကွန်ယက်များ၏ applications များဖြစ်ကြသည် စမတ်ဖုန်းများအတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသော application များ၏ "abc"။ ထိုသူတို့ကလည်ပတ်မှုစနစ်များ, အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မော်ဒယ်များအထက်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာနာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုရမယ့် application တွေကိုလျစ်လျူရှုလို့မရပါဘူး။ ဒီအက်ပလီကေးရှင်းတွေမပါဘဲစမတ်ဖုန်းတွေကိုလက်တွေ့မှာမဖြစ်နိုင်ပါ။ သူတို့ဟာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အသက်ရှင်ပြီးအပြန်အလှန်နေကြတယ်။
အဖြစ် ကွန်ယက်များ၏ကွန်ယက်ကို, ဒီလူမှုရေးကွန်ယက်အကြောင်းကိုမသိသောအနည်းငယ်သာသင်ပြောနိုင်ပါတယ်။ အမှန်မှာ၊ သင်သည်စမတ်ဖုန်းသို့သွားရန်ဆုံးဖြတ်ပြီး၊ Facebook အကောင့်မရှိသေးပါကယခုအချိန်သည်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာကြီးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလူမှုကွန်ယက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မူလက microblogging ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ပceivedိသန္ဓေယူ။ ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်၎င်းကိုအသုံးပြုသူများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တကယ့်ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခု။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများ၊ အာဏာပိုင်များ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အပျော်တမ်းမီဒီယာများသည်ကျွန်ုပ်တို့လျစ်လျူရှု။ မရသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်ထင်မြင်ချက်များကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
ဓာတ်ပုံချစ်သူများအတွက်လူမှုကွန်ယက်ရန် သို့မဟုတ်ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများသို့ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ လောလောဆယ်သို့ကူးပြောင်း အစွမ်းထက်ပလက်ဖောင်း လူများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ပုံပြင်များနှင့်စိတ် ၀ င်စားစရာကုမ္ပဏီများကိုရှာဖွေရန်။ Android စမတ်ဖုန်းအသစ်မှ Instagram ကိုပျောက်ဆုံးနေမည်မဟုတ်
ဆက်သွယ်ရေးသည်တယ်လီဖုန်း၏ပထမဆုံးရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်, စမတ်ဖြစ်စေမ။ ငါတို့သိသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်ရေးပုံစံသည်ပြောင်းလဲသွားပြီ။ မည်သည့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတော့ဘူးလုပ်နေကြသည်။ ပြီးတော့ Android Smartphone တစ်လုံးကိုသင့်လက်ထဲထည့်ထားလိုက်ရင်အနည်းဆုံးနှစ်ခုကိုတပ်ဆင်ရန်လုံးဝမဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
Es ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးအများဆုံးအသုံးပြုသောမက်ဆေ့ခ်ျများ။ ယနေ့ WhatsApp ကိုမည်သူအသုံးမပြုသနည်း။ ဤလျှောက်လွှာကိုထည့်သွင်းထားသောကုမ္ပဏီအချို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ဖို့အခြေခံ App တစ်ခု
များစွာသောအားဖြင့် "အခြား" အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား။ ဒါပေမယ့် မရေမတွက်နိုင်သောနှိုင်းယှဉ်အတွက် WhatsApp ကိုထက်ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏အနှစ်သာရသည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်နှင့်ဆင်တူသည်။ ဒါပေမယ့် မွမ်းမံမှုများအပေါ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်အတူစဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ် WhatsApp ထက်ပိုမိုစွယ်စုံဖြစ်ရန်စီမံသည်
သင့်စမတ်ဖုန်းအတွက်အသုံးဝင်သော application များ
အထက်ဖော်ပြပါအက်ပ်များသည်ယနေ့လည်ပတ်နေသောစမတ်ဖုန်းအားလုံးနီးပါးကိုသင်တွေ့မြင်ရမည့်အရာများဖြစ်သည်။ သို့သော် Google Play Store ၏ကျယ်ပြန့်မှုတွင်များစွာသောနေရာများရှိသည်။ ထိုအရှိပါတယ် သင်လိုအပ်သည့်အရာအတွက်သာသင့်အားကူညီပေးနိုင်သည့် application များ။ ခြောသော App များ သူတို့ကသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းကိုနောက်ထပ်အသုံးဝင်မှုတစ်ခုပေးလိမ့်မယ် နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း။
ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့အနှစ်သက်ဆုံး application များနှင့်နေ့စဉ်နေ့စဉ်အသုံးပြုနေသော application အချို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ လူများစွာအတွက်စမတ်ဖုန်းများသည်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဖျော်ဖြေရေး၏နောက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သို့သော်များစွာသောအခြားသူများအတွက်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုများစွာကူညီနိုင်သည့်အသုံး ၀ င်သည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အားလုံးကိုစောင့်ရှောက်ရန်နေရာဒီဟာကသင့်ကိုပိုပြီးစနစ်တကျဖြစ်အောင်အများကြီးကူညီနိုင်မယ့်အသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ မှတ်စုစာအုပ်အနေဖြင့်ပိသန္ဓေယူသော်လည်းထိုအရာသည်များစွာအထောက်အကူပြုသည်။ ဓာတ်ပုံများ၊ ဖိုင်များ၊ အော်ဒီယိုများသို့မဟုတ်စာသားမှတ်စုများကိုသင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ချိန်းဆိုမှုများသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်သတိပေးချက်ဖြစ်သည်။ ရုံးအတွက်သို့မဟုတ်သင်၏အရာများအတွက်အပြည့်စုံဆုံးလျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အများဆုံးပြောင်းလဲသွားသည်။
ဒီ application အတွက်အသစ်နှင့်အသုံး ၀ င်သောအရာသည်ထိုအရာဖြစ်သည် သင်၏စက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုပေါ်တွင်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ တဖန်သင်တို့အမြဲသူတို့ကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ သင့်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တွင်မှတ်စုတစ်ခုရှာရန်စိတ်မပူပါနှင့်။ Evernote တွင်သင်ရေးချမည့်အရာများသည်သင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းအားလုံးတွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အသုံးဝင်ဆုံး App တစ်ခုမှာ။
Evernote - မှတ်စုရေးသူနှင့်နေ့စဉ်စီစဉ်သူ
ရေးသားသူ: Evernote ကော်ပိုရေးရှင်း
အခြား အလုပ်စည်းရုံးရေးများအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောကိရိယာတခု။ ဖျော်ဖြေဖို့အကောင်းဆုံး အုပ်စုလိုက်အလုပ်တာဝန်များ. ဘုတ်တစ်ခုဖန်တီးပါ နှင့်သင်ပူးပေါင်းရန်လိုအပ်သူမည်သူမဆိုနှင့်အတူမျှဝေပါ။ သင်လုပ်နိုင်သည် ကော်လံထဲမှာစာရင်းဖန်တီးပါ အလွန်အမြင်အာရုံ။ Y သူတို့ကိုကဒ်များနှင့်အတူဖြည့်ပါဥပမာအားဖြင့် to-dos မှ။ ဤကဒ်များကိုကော်လံမှကော်လံသို့လွယ်ကူစွာဆွဲယူနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ရုံးတစ်ခုသို့မဟုတ်အလုပ်တစ်ခုကိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်မျှဝေလျှင်သင်ကိုယ်တိုင်စုစည်းရန် ပို၍ လက်တွေ့ကျ။ အသုံးဝင်သောနည်းလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့မစဉ်းစားနိုင်ပါ။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်သင်၏ဘုတ်အဖွဲ့ကိုမျှဝေပါ။ က) ဟုတ်တယ် လူတိုင်းသည်ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းနှင့်ပြီးစီးခဲ့သည့်အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သောနောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်လိမ့်မည်။ အလွန်အမင်းထောက်ခံလျှောက်လွှာ။
Trello: မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုမည်သူမဆိုစီစဉ်ပါ။
ရေးသားသူ: Trello, Inc
ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးများအကြားနေရာတစ်နေရာအမြဲတမ်းအနိုင်ရသောလျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၏ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူ "နောက်မှသိမ်းဆည်းပါ", ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်နိုင်ကြောင်းဘာမှမလွတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်။ အဲဒါကိုသင်၏ "အိတ်ကပ်" ထဲထည့်ပြီးအချိန်ရှိရင်ဖတ်ပါ။ ဆောင်းပါးများနှင့်သတင်းများကိုအကန့်အသတ်မရှိသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ထိုအရာကိုသင်နှင့်အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်အောင်သင်မှာယူနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုရပ်တန့်မသွားသောသူတို့အတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်မှာသေချာသည်။ ထိုအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုမလွတ်စေရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာ
အိတ်ဆောင်ကအသုံးပြုရလွယ်ကူသကဲ့သို့အသုံးဝင်သည်။ ထုတ်ဝေမှုကိုသင်၏ "အိတ်ကပ်" ထဲတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းသည်လွယ်ကူပြီးလွယ်ကူသည်။ ထည့်သွင်းပြီးနောက် Pocket သည်၎င်း၏အိုင်ကွန်နှင့်အတူ extension တစ်ခုပါရှိသည်။ share option ကို အသုံးပြု၍ အလိုအလျှောက်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိမ်းချင်တဲ့အရာအားလုံးကိုရှာဖို့လျှောက်လွှာကိုသုံးရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးစွာသောအကူအညီဖြစ်စေနိုင်သောအလွန်ကြီးစွာသောစိတ်ကူး။
အိတ်ဆောင်: သိမ်းဆည်းပါ။ ဖတ်ပါ။ ကြီးပွား။
ဒီအပလီကေးရှင်းကိုအိတ်ကပ်နှင့်အလွန်ဆင်တူသောအတွေးအခေါ်ဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အခြားမီဒီယာအမျိုးအစားများလည်းပါဝင်သည်။ Podcast တခုကိုကမ္ဘာကြီး ဒီပလက်ဖောင်းအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုပြီးကိန်းဂဏန်းများပိုများလာပါတယ်။ ဟာသ၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဂီတအစီအစဉ်များ။ အရာအားလုံး iVoox နဲ့ကိုက်ညီ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုသင်နားထောင်နိုင်သည့်ကြီးမားပြီးစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသောပလက်ဖောင်း.
ရေဒီယိုကိုသင်ဘယ်တော့မှနားမထောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုပြသလျှင် iVoox ပေါ်မှာရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ သင်သည်မတူညီသောစာပေများကိုစာရင်းသွင်းနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်၏အရသာများနှင့်နောက်ဆက်တွဲအစီအစဉ်များနှင့်ဆက်စပ်သောအကြောင်းအရာအသစ်ရှိသည့်အခါသင်သိလိမ့်မည်။ အရာအားလုံးအလုပ်အတွက်ဖြစ်မသွား, ဟုတ်သလော သင့်ရဲ့အားလပ်ချိန်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောမဟာမိတ်။
Podcast & Radio iVoox - ကန့်သတ်ချက်မရှိသောအသံ
ရေးသားသူ: iVoox Podcast y ရေဒီယို
အချိန်ကြာမြင့်စွာမရပ်တန့်ဘဲလျှောက်လွှာများကိုသင့်အားအကြံပေးနိုင်သည်။ ဤအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့အများဆုံးအသုံးပြုသောအသုံးအများဆုံးသောအသုံးအနှုန်းများဖြစ်သည်။ သို့သော်သုံးစွဲသူတစ် ဦး စီသည်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်မှာ Play Store သို့ ၀ င ်၍ သင်၏“ ဘဏ္treာများ” ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်လုံခြုံမှုတစ်ခုခုအတွက် application တစ်ခုလိုအပ်ပါက၎င်းသည် Google application store ၌ရှိသည်။
၎င်းကိုဖတ်ပြီးကြားခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည် Android ဟာလုံခြုံတဲ့ operating system တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်မှန်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အများဆုံးအသုံးပြုသောစနစ်ဖြစ်သည့်၎င်းသည် malware တိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးသောအရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိုလုံခြုံစွာထားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ကိုင်ဖုန်း၏“ သန့်ရှင်းရေး” ကိုထိန်းချုပ်ရန်အသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးပစ္စည်းများရှိသည်။
ထိုသို့စိတ်တွင်ဘွားမြင်ရပါမည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏လုံခြုံမှုသည်၎င်းတို့ကိုဖော်ထုတ်မည့်အန္တရာယ်အပေါ်များစွာမူတည်သည်။ သံသယရှိသောဂုဏ်သတင်းရှိသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကြည့်ခြင်း သံသယဖြစ်ဖွယ်အီးမေးလ်များကိုဖွင့်ပါ။ သို့မဟုတ်အရည်အသွေးနိမ့်ပြီးကြော်ငြာစီးသည့်အက်ပလီကေးရှင်းအချို့ကိုပင်ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းဖြစ်နိုင်ချေရှိသောရောဂါကူးစက်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, Android ကိုလုံခြုံရေးတိုးတက်စေရန်အစဉ်မပြတ်အလုပ်လုပ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် Play Store မှတားမြစ်ခြင်းဖြင့်အန္တရာယ်ရှိသောအက်ပလီကေးရှင်းများအားပြင်းထန်စွာစစ်ဆေးသည်။
Android ကိုတက်ကြွစွာအသုံးပြုသူအနေဖြင့်စမတ်ဖုန်းတွင်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကြီးမားသောပြproblemနာတစ်ခုကိုတစ်ခါမှမကြုံဖူးပါ။ ဒါကတကယ်တော့ဒါဟာကွန်ပျူတာထဲမှာဖြစ်သကဲ့သို့၊ ပရိုဂရမ်တစ်ခုသို့မဟုတ် application တစ်ခုကိုပြုလုပ်သည့်ကိရိယာတစ်ခုပေါ်တွင်ဖိုင်များ၏အဆက်မပြတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည်၎င်း၏လည်ပတ်မှုနှေးကွေးသွားသည်။ ထို့ကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်အနည်းငယ်ဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲသည့်အကြောင်းအရာနှင့်၎င်း၏ဇာစ်မြစ်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်ထားရမည်။
အကယ်၍ သင်လိုချင်တာကသင်၏စကားဝှက်နှင့်အချက်အလက်များကိုမည်သည့်နေရာ၌မဆိုလုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားမည်ကို သိ၍ ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်ခြင်းဖြစ်သည်ဆိုပါကဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုတပ်ဆင်ခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်။ တစ် ဦး ကအကြီးအ option ကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ် 360 လုံခြုံရေး, အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောမိုဘိုင်းလုံခြုံရေးဆော့ဖ်ဝဲကိုစဉ်းစား ကမ္ဘာ၏ Play Store တွင်ငါးခုအနက်မှ ၄.၆ မှတ်သည်အချည်းနှီးဖြစ်သည်။ ဒေါင်းလုပ်သန်းနှစ်ရာကျော်ရှိခြင်းအပြင်
ကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်များကို Android တွင်မည်သို့ကူးယူရမည်နည်း
ယေဘူယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အဖိုးတန်သောအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ငါတို့မဆုံးရှုံးသင့်သောအလုပ်စာရွက်စာတမ်းများပင်။ ငါတို့ရဲ့ဒေတာအားလုံးလုံခြုံတယ် မတော်တဆမှု (သို့) တတိယပါတီလက်လှမ်းမီမှုဖြစ်ခြင်း၊ ဂူဂဲလ်မှကျွန်ုပ်တို့အားရရှိနိုင်သည့်ကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံး။
ကျေးဇူးတင် Google အဆက်အသွယ်များ၊ ဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ် Google Driveကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဖိုင်များသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုမည်သည့်နေရာ၌မဆိုလုံခြုံစိတ်ချစွာရနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက Device ထဲမှာ backup တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပြောပြပါမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ္တူကူးရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးစရာကိုဖွင့်ရမည် «ချိန်ညှိချက်များ»။ အဆင့်မြင့် settings ကိုသွားပြီးရှာတယ် "ကိုယ်ပိုင်"။ ဆက်တင်တစ်ခုဖြစ်သည် "အရန်ကူးခြင်း".
ဤရွေးချယ်မှုအတွင်းကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များကိုစက်ပစ္စည်းပေါ်၌ကူးယူနိုင်သည်သို့မဟုတ်ဂူဂဲလ်အကောင့်မှလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ဖြင့်စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရမည်။ ဥပမာအားဖြင့် operator ၏ပြောင်းလဲမှုအတွက်ကွန်ယက်ချိန်ညှိချက်များကိုလည်းပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ စက်ရုံမှဒေတာများကိုလည်းပြန်ယူနိုင်သည်၊
အကယ်၍ သင်သည် Android ကိရိယာအသစ်တစ်လုံးဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြခဲ့သည့်ယခင်အဆင့်များအားလုံးသည်အလွန်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်မိုဘိုင်းနည်းပညာများကိုသင်မစတင်မှီကပါရှိလိမ့်မည်။ သင်အချိန်မရွေးပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိစေရန်ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် ၎င်းသည်သင်စမတ်ဖုန်းလောကတွင်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ ထိုအဟုတ်ကဲ့သင် Android ပေါ်မှာရှိကြ၏.
ဒါကြောင့်ဒီလမ်းညွှန်ကိုပိုပြီးဘက်စုံသုံးနိုင်အောင်နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ဆင့်လည်းပါမယ်။ ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်မိုဘိုင်း operating system ကို ၀ င်လိုသူအားလုံးအတွက်ဤကြိုဆိုပွဲကိုပြုလုပ်နိုင်မည်။ အသုံးပြုသူအသစ်များနှင့်အခြား operating system များမှလာသူများ။ ထို့အပြင် operating system တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်မည်သည့်အတားအဆီးမျှမဖြစ်စေပါ။
ကျွန်ုပ်၏ဒေတာများကို Android မှ iPhone သို့မည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်နည်း
Google မှသူတို့သည် iPhone မှသုံးစွဲသူများ၏ Android သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှကိုအမြဲထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ဒေတာများပြောင်းရွှေ့ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့် application များကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံလုပ်ငန်းစဉ်သည်ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းပြီးရှုပ်ထွေးပုံရသည်။ ဂူဂဲလ်ကတချို့ပေးပါတယ် Android မှ iOS အချက်အလက်သို့ပြောင်းလဲမှုကိုသိသာထင်ရှားစေမည့်ကိရိယာများ
iOS အတွက် Google Drive
ပန်းသီး၏လက်မှတ်အက်ပလီကေးရှင်းမှတဆင့်ဂူဂဲလ်မှအခမဲ့ကမ်းလှမ်းသောအသုံးဝင်ဆုံး application များထဲမှတစ်ခု။ ဒီအက်ပ်နှင့်အတူ ငါတို့လိုအပ်သည်ဟုယူဆသောအကြောင်းအရာအားလုံးကိုတင်ပို့နိုင်သည် iPhone အဟောင်း မှနေ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android အသစ်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ငါတို့သည်အနည်းငယ်ရိုးရှင်းတဲ့ခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဖိုင်များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုသိုလှောင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်၎င်းကိုကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနိုင်သည့်အပြင် iPhone ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ငါတို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ် ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များကို iOS မှ Android သို့လွှဲပြောင်းရာတွင်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကဒီ application ကို download လုပ်ပါ။ Y တစ်ချိန်က installed အိုင်ဖုန်းပေါ်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂူဂဲလ်အကောင့်ဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ အချက်အလက်များကိုဤအကောင့်မှကူးယူပါလိမ့်မည်။
iOS အတွက် Google Drive အတွက် Google Drive ကိုအသုံးပြုပြီးအောက်ပါတို့ကိုလုပ်ပါ။ မှ ချိန်ညှိချက်များမီနူး ငါတို့ရွေးရမယ် "အရန်ကူးယူပါ"။ ငါတို့လုပ်ရမယ် အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Google Drive အကောင့်တွင်ကူးယူရန်ရွေးချယ်ပါ ငါတို့ယခင်ကဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်သော။ ဤအရာပြီးဆုံးပါကကျွန်ုပ်တို့ကူးယူလိုသည့်ဖိုင်များ၊ အဆက်အသွယ်များ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ပြက္ခဒိန်အဖြစ်အပျက်များ၊ WhatsApp စကားပြောဆိုမှုများပင်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်လိမ့်မည်။ လွယ်ပါတယ်၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android စက်တွင်တူညီသောလျှောက်လွှာကိုဖွင့်သောအခါ, စက်ရုံမှာကြိုတင်ထည့်သွင်းထား ကူးယူထားသည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုကြည့်နိုင်သည်။ WhatsApp မှကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းသောအခါ၊ ချက်တင်များသိမ်းဆည်းရန်ဂူဂဲလ်ဒရိုက်ထဲမှမိတ္တူထဲမှပြန်လည်ယူခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးရမည်။ အဆက်အသွယ်များ၊ ပြက္ခဒိန်များစသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်းအလားတူလုပ်ဆောင်ပါမည်။
iOS အတွက် Google ဓါတ်ပုံများ
Google Drive ကိုကန့်သတ်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားသူပေးထားသောသိုလှောင်မှုသည်မလုံလောက်ကြောင်းတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ယေဘူယျစည်းမျဉ်းအရ စမတ်ဖုန်း၏မှတ်ဉာဏ်သိမ်းဆည်းမှုအမြင့်ဆုံးရာခိုင်နှုန်းသည်ဓာတ်ပုံများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ပြီးတော့အဲဒါတွေကသိုလှောင်မှုကိုရှုပ်ထွေးစေတယ်။
ငါတို့ကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက် Apple App Store တွင် Google Drive မှမကြာသေးမီကလည်း ဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ မစဉ်းစားမဆင်ခြင်နိုင်သော 15 GB နှင့်အခမဲ့ရရှိနိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများ၏သိုလှောင်မှုကိုများစွာသက်သာစေသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android စမတ်ဖုန်းအသစ်တွင်ဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုအားလုံးကိုချက်ချင်းရယူနိုင်သည်.
အမြဲတမ်းပေမယ့် မူလဇာတိဂူဂဲလ်အက်ပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် ၎င်း၏ solvency နှင့်သက်သေပြလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည်။ ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးတွင်အခမဲ့ရှာနိုင်သောသက်ဆိုင်ရာအက်ပလီကေးရှင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုနိုင်သည်။ သင်ဤအဆင့်များအတိုင်းလိုက်နာရန်မရှင်းလင်းရသေးပါကရိုးရှင်းပြီးမမှားနိုင်သောလျှောက်လွှာတစ်ခုရှိသည်။
Contacts Transfer / Backup ကိုရွှေ့ပါ
သင်၏ iPhone ဟောင်းမှသင်၏ Android စမတ်ဖုန်းအသစ်သို့အဆက်အသွယ်များကိုပြသခြင်းသည်ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်ပါကစိတ်မပူပါနှင့်။ သောကြောင့် သင်၏ Android ဖြင့်အစပြုခြင်းသည်မှားယွင်းသောခြေထောက်ပေါ်မစတင်ပါစေနှင့် လျှောက်လွှာကိုသင်ရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်သင်အကြံပြုရန်တွန့်ဆုတ်မည်မဟုတ်ကြောင်းလျှောက်ထားခဲ့သည်။ တစ်မိနစ်တောင်မကြာခင်သင်သည်အဆက်အသွယ်များကိုရှုပ်ထွေးစရာမလိုဘဲကိရိယာတစ်ခုမှတစ်ခုသို့မည်သို့သွားနေသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
သင်သည် iOS မှလာသည်ဖြစ်စေ၊ device အသစ်တစ်ခုကိုအသစ်ပြန်လုပ်ပြီးသင်၏အဆက်အသွယ်စာအုပ်ကိုပြန်လည်ရယူလိုသည်ဖြစ်စေ ဒီစံပြ application ဖြစ်ပါတယ်။ Play Store တွင်မကြာသေးမီကမွမ်းမံထားသောဗားရှင်းနှင့် ၄.၈ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည်၎င်းကိုမပြုလုပ်မီ။ Y ၎င်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခြင်း၏အတွေ့အကြုံသည်၎င်း၏အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအတည်ပြုသည်.
ငါတို့လုပ်ရလိမ့်မယ် iPhone ပေါ်ရှိ app နှင့် app အသစ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ ဖုန်းနှစ်ခုလုံးတွင်၎င်း၏အိုင်ကွန်မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ရမယ်ကြောင်းအကောင့်သို့ယူခြင်း Bluetooth ကိုဖွင့်ထားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းအသစ်တွင်“ အခြားဆက်သွယ်မှုများမှအဆက်အသွယ်များကိုတင်သွင်းခြင်း” ရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးပါလိမ့်မည်။ ၎င်း app သည်အနီးအနားရှိ Bluetooth ကိရိယာများကိုခြေရာခံလိမ့်မည်။ ကိရိယာအဟောင်း၏အမည်ကိုဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့သောအခါ၎င်း၏အမည်နှင့်ပါသောအိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုသာရွေးရမည်။
ငါတို့ရွေးပါလိမ့်မယ်, ဒီကိစ္စမှာ, ကျနော်တို့အဆက်အသွယ်များတင်သွင်းချင်သောကနေ iPhone။ လိုအပ်သည် app ကိုခွင့်ပြုချက်ပေးပါ သင်ပြက္ခဒိန်ထဲမှာဒေတာကိုဝင်ရောက်နိုင်အောင်လိုအပ်သော။ ငါတို့လုပ်ပြီးတာနဲ့ Phonebook သည်ကိရိယာအဟောင်းမှအသစ်တစ်ခုသို့ကူးယူပါလိမ့်မည်။ ဆက်သွယ်မှုစာအုပ်တွင်တင်သွင်းထားသောအချက်အလက်များကိုနေရာချထားရန်ကိရိယာအသစ်အတွက်ခွင့်ပြုချက်ပေးရန်သာကျန်ရှိသည်။ Y ချက်ချင်းပဲကျွန်ုပ်တို့သည်ဖုန်းအသစ်ပေါ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များအားလုံးကိုခံစားနိုင်သည်။ ဒါလွယ်ကူပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များကိုပလက်ဖောင်းတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ရွှေ့ပြောင်းရာတွင်အခက်အခဲကြောင့် operating system ကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိကြောင်းဆင်ခြေအဖြစ်အသုံးမပြုတော့ပါ။ ဤအပလီကေးရှင်းများ၏ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ရိုးရှင်းသောအဆင့်များမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုင်များ၊ ဓာတ်ပုံများနှင့်အဆက်အသွယ်အားလုံးကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
သင်သည် Android လောကတွင်မိမိကိုယ်ကိုနှစ်မြှုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ
ယနေ့တွင် ဂူဂဲလ်မိုဘိုင်းဂေဟစနစ်ထဲသို့မည်ကဲ့သို့အပြည့်အ ၀ ဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်းအသေးစိတ်ရှင်းပြထားသည်။ ယခုအချိန်တွင် Android သည်သင်၏ဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။ စနစ်တကျစီစဉ်ထားပြီး စမတ်ဖုန်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးဝင်တဲ့ "extension" ဖြစ်လာတယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆက်ဆံရေးတွင်အတားအဆီးတစ်ခုမဖြစ်စေရန်၊ သင့်လျော်သောအသုံးပြုမှုဖြင့်၎င်းသည်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်ဟာ iOS နဲ့ Android ကြားမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကိုအစကတည်းကတွန့်ဆုတ်နေတယ်ဆိုရင် အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ operating system နှစ်ခုစလုံးသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပို၍ ဆင်တူလာသည်။ အခြေခံအားဖြင့်ပြောရရင်သူတို့နှစ်ခုစလုံးဟာအတူတူပါပဲ၊ သူတို့အတူတူအလုပ်လုပ်ကြတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။ ပြီးတော့သူတို့နှစ် ဦး စလုံးဟာသူတို့ပေးတဲ့အခြေခံဝန်ဆောင်မှုများကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည့် application store ကထောက်ပံ့သည်။
ကျန်တဲ့ Android မှာကျန်နေတာကအဓိကအခြေအနေတွေကြောင့်ပါ။ နှင့်အတူတစ် ဦး operating system ကို ပိုပြီးပွင့်လင်းစိတ် အားလုံးရှုထောင့်၌တည်၏။ ၎င်း၏အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲသည်၎င်း၏အကြီးမားဆုံးသောပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးကြီးသောလိုင်စင်လိုအပ်စရာမလိုဘဲလျှောက်လွှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း။ များစွာသောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်မှုများရှိသည်။ Android operating system များမှ လွဲ၍ မည်သည့်အရာမျှပျောက်ဆုံးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်အစပြုသူတစ် ဦး မဟုတ်ပါကဤလမ်းညွှန်သည်အလွန်အခြေခံကျနိုင်သည်။ ဒီက၎င်း၏ဖန်တီးမှု၏စစ်မှန်တဲ့အဆုံးခဲ့ပေမယ့်။ အခြေအနေများကြောင့်ယခုအချိန်အထိမိုဘိုင်းနည်းပညာအသစ်များကိုအသုံးပြုရန်မတတ်နိုင်သူများ (သို့) အလိုမရှိသူများအားကူညီပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းညွှန်သည်သင့်အတွက်အသုံးဝင်ပါသလား။ သင်၏စမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုတတ်နိုင်သလောက်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျန်သည့်အရာအားလုံးသည် Android အတွေ့အကြုံ၊ ကံကောင်းခြင်းကိုအပြည့်အဝခံစားရန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင့်မှာသံသယရှိနေရင် (သို့) ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိတဲ့တစ်ခုခုရှိရင်၊ ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်ချက်တစ်ခုထားခဲ့ပါငါတို့သည်သင်ကူညီလိမ့်မယ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android လက်စွဲ၊ အစပြုသူများအတွက်အခြေခံလမ်းညွှန်
Great post !! အရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဖုန်းအသစ်တစ်လုံး ၀ ယ်တဲ့အခါသူတို့ကအဲဒီအထုပ်ထဲမှာထည့်သင့်တယ်။
၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဆဲလ်ဖုန်းအများစုတွင်လက်စွဲစာအုပ် (ရိုးရှင်းသောဘရိုရှာဖြင့်အစားထိုး) မရှိခြင်းနှင့်ခြားနားသည်။ ၎င်းကိုတားမြစ်ပြီးအပြစ်ပေးသင့်သည်။
စကားမစပ်, ANDROID ဆိပ်ကမ်းများတွင်လက်စွဲမရှိခြင်း၏ဥပမာအဖြစ်:
ကျွန်ုပ်၏ XIAMI MI A2 နှင့် A1 ကို Android 8.1 ဖြင့်ခေါ်သည့်အခါကျွန်ုပ်၏နံပါတ်ကိုမည်သို့ဖုံးကွယ်မည်နည်း။
ကျွန်ုပ်သည်အပူတပြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကို configuration ထဲတွင်သို့မဟုတ်မပါရှိသည့်လက်စွဲတွင်ရှာ။ မတွေ့နိုင်ပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ခေါ်ဆိုခဲ့သောအော်ပရေတာ၏အမှားမဟုတ်ပါ။